Kurara Kutenderera kunovandudzwa kuongorora kurara kubva kune yako Apple Watch | Ndinobva mac
Kurara Kutenderera kunovandudzwa kuongorora kurara kubva kuApple Watch yako
Chirongwa Kurara Purogiramu iyo yakaburitswa yeApple Watch muna 2018 yakatambura zvirambidzo zveApple zvega uye pakupedzisira yakamira kuvandudza. Ichi chishandiso chinotipa iyo yekurara yekutarisa sarudzo yakavandudzwa uye kuvhurwa zvakare kuti iwe ugone kuishandisa seyakanaka alarm alarm.
Zviripachena kuti iyo app ichaita isu kuburikidza yakasimbiswa maitiro kurara kuongorora uye kunotimutsa nenzira yakapfava kana tiri panguva iyoyo ye "kurara zvishoma" kuti tidzivise kutyisa nemawadhi ane ruzha. Iyi Anwendung inoita kunge inoona yakakosha nguva yezvikamu zvehurefu hwekurara uye inoshandisa iyo kutimutsa isu nenzira yakapfava uye yakasikwa nzira.
Izvi zvinoshandiswa nemaalgorithms uye mune Nguva yemaminitsi makumi matatu pamberi Panguva yatinoisa alarm, inotanga kutimutsa zvinyoro nyoro. Izvi zvinonzi kumuka muchikamu chekurara chakareruka uye nekuda kwechikonzero ichi zvinonzi ndizvo zvichave chinhu chepedyo kumuka zvakasununguka pasina maaramu erudzi chero rupi zvaro. Kumuka usina maaramu chinhu chiri pachena kuti hachishande kune wese munhu uye vanhu vazhinji vanozoramba vachirara kwemaawa nemaawa. Chero zvazvingaitika, kumuka nenzira yakasikwa zvinoita kuti tinzwe kuzorora uye nesimba rakawandisa.
Runyerekupe rwazvino runotaura nezve mukana wekuti Apple ichavhura zviri pamutemo sarudzo yekuita yekurara yekutarisisa natively mune inotevera vhezheni yeWOSOS, asi nepo sarudzo iyi isipo isu tine mamwe maapplication anogona kubatsira kana tichida kuona ruzivo urwu. Mune ino kesi iyo application ndeye mahara uye inosangana zvisina musono pamwe nehutano Hutano yedu iPhone yekutevera kurara. Unogona kuzviedza uye kana zvikasashanda ... zvakanaka iwe unoziva.
Kurara Kutenderera - Kurara Trackervakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kurara Kutenderera kunovandudzwa kuongorora kurara kubva kuApple Watch yako
Makumi mana mavara anogona kuitika ePowerbeats Pro
Ziva zvikamu zvakasiyana zvemwedzi neakarenda yemwedzi